Mbola irery ny kanelina: i Manjaro dia manafoana ny fanontana miaraka amin'ity birao ity | Avy amin'ny Linux
Manuel de la Fuente | | Fisehoana / personalization, Fitsinjarana, GNU / Linux, About us
Omaly dia naneho hevitra momba ilay vaovao izahay fa Sinnarka, fizarana miorina amin'ny Arch Linux amin'ny kanelina toy ny tontolon'ny birao, Handao an'ity aho sotro rovitra hifindra any GNOME Shell. Ao amin'ny lahatsoratra narosoko Manjaro Cinnamon Community Edition ho mpisolo toerana azo atao Sinnarka ho an'ireo izay mitady fizarana hafa mifototra amin'ny andohalambo amin'ny kanelina.
Azonao atao ny manadino an'io tolo-kevitra io satria Vao nanambara i Manjaro fa nofoanana tokoa ity fanontana ity. Ny fampandrenesana izany dia natao tamim-pankasitrahana nandritra ny fampisehoana ny Manjaro Cinnamon Community Edition 0.8.5, natomboka omaly ary izany no ho farany vokariny miaraka amin'ny sotro rovitra de GNOME Shell. Ny antony manosika? Mitovy amin'ny an'ny Sinnarka: ny tsy fahaizana mitazona ny birao fampandrosoana ho miadana toa kanelina amin'ny distro izay maharaka mandrakariva toa azy Arch Linux. Miaraka amin'ity dia ny distro roa ihany (raha ny fantatro) mifototra amin'ny andohalambo izay natolotr'izy ireo kanelina napetraka mialoha ho fenitra.
1 GNOME 3.8: ny tena meloka
2 Kanelina sy ny fivoarany miadana
3 Ny faran'ny kanelina ivelan'ny Linux Mint?
GNOME 3.8: ny tena meloka
Ny mpanoratra ao ambadiky ny fiatoana eo anelanelan'ny birao noforonin'i Linux Mint ary ny distrosan'ny fianakaviana andohalambo dia tsy iza fa ny mitovy GNOME. Ny kinova 3.8 Ny biraon'i Miguel de Icaza dia ao amin'ny toeram-pivarotana fitsapana an'ny Arch Linux ary antenaina fa hanomboka hiditra ao amin'ilay fantsona miorina afaka andro vitsivitsy. Ny olana dia ny zazalahin'i GNOME, mampiady hevitra foana, Adinon'izy ireo tanteraka ny fampifandimbiasana ny GNOME 3.8 miaraka amin'ireo kinova taloha, ka ny fonosana rehetra mampiasa tranomboky sy API avy amin'ny kinova taloha dia tsy ho azo ampiasaina.. Toy izany ny resaka kanelina, izay ao amin'ny kinova misy azy ankehitriny 1.7 ihany no manohana hatramin'ny GNOME 3.6.
Ny valiny dia ho toy ny GNOME 3.8 avia, izay baomba ataomika dia handrava izay fametrahana kanelina mavitrika amin'ny Arch Linux.
Kanelina sy ny fivoarany miadana
Amin'izany rehetra izany dia mipetraka ny fanontaniana: maninona kanelina dia lavitra lavitra ny fampandrosoana ny GNOME? Fa maninona ianao no tsy mbola nanohana ny kinova 3.8? Izy irery no nanome ny valiny Clement lefebvre andro vitsy lasa izay: satria ho azy ireo dia tsy ilaina izany. Ny kanelina dia tsy teraka tamin'ny maha-tetikasa Linux Mint mahaleo tena azy, hatrany am-piandohana dia natao ho birao an'io distro io fa tsy zavatra hafa.. Raha toa ka niafara tamin'ny fandefasana izany tany amin'ny toeram-pivarotany manokana ireo distro hafa dia satria nanapa-kevitra ny hanao izany izy ireo, saingy tsy noforonina noho izany i Kanelina.
Ary ao mint tsy manana faniriana hitondra izy ireo kanelina a GNOME 3.8 satria ao amin'ny trano fitehirizan-dry zareo, ary koa ny an'ny fianakaviana iray manontolo Ubuntu, mbola miaraka izy ireo GNOME 3.6 ary maharitra fotoana vao hahazoan'izy ireo ilay kinova vaovao. Ary azo antoka fa rehefa tonga amin'ny farany dia efa natomboka GNOME 4.0, sns., mihemotra foana.
Ny faran'ny kanelina ivelan'ny Linux Mint?
Ka inona no hitranga kanelina manaraka izao? Tsy dia haiko loatra raha misy vahaolana, fa ny scenario eo no ho eo dia hanomboka hanjavona amin'ireo distro rehetra misy an'i GNOME 3.8. Ny voalohany dia ny famotsorana como el andohalambo (fonosan'ny kanelina dia mbola ao amin'ny AUR fa angamba tsy ho ela izy ireo dia hisotro ronono na fara-faharatsiny marika efa lany andro) ary aorian'izay ny fihodinana semi-mihodina ary ireo rehetra izay mitady hitazona ny kinova farany amin'ireo fonosana ao amin'ny fitoerany.
Amin'ny farany dia toa izay te hampiasa kanelina amin'ny maha birao anao dia tsy maintsy mijanona ao ianao Linux Mint ary any amin'ireo distro hafa dia hanana safidy iray tsy voafidy mifantina isika.
Via | Tena Linux
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Ny kanelina dia mbola tavela irery: Manjaro dia manafoana ny fanontana nataony amin'ity birao ity
Izany dia mitranga amin'ny latabatra misy mpitahiry vitsivitsy.
Manomboka mihalehibe ny volom-panala. Vaovao ratsy ho an'ny kanelina.
Manitsy ny hevitro aho, ho an'ireo mpampiasa Kanelina.
Eny, araka ny nolazain'izy ireo taloha, ny kanelina dia ny firaisan'ny mint linux
Efa nolazaiko io omaly
ary ny fanontaniana an-tapitrisany dolara, ho an'ny netbook izay no birao tianao? Tsy afaka mandresy lahatra ahy i lxde sy xfce, tsara kokoa ny openbox fa tsy misy isalasalana fa ny kanelina no safidy lehibe ... ary ho lavo amin'ny fomba mitovy ihany koa ny vady?
Xfce dia iray amin'ireo tsara indrindra misy, toy ny lxde
Gnome sy Kde mety ho somary mavesatra ihany
Manohana azy aho, na dia somary mavesatra ihany koa aza ny kanelina ary tsy hanome sosokevitra izany ho an'ny mpampiasa netbook aho
Ny hany zavatra tsy tiako amin'ny LXDE dia ny sary famantarana azy: S.
LXDE na OpenBox dia tsara ho an'ny netbook.
Mbola tsy azoko hoe maninona ny olona no manary ny DE feno tanteraka sy voadio androany, KDE.
Ny modularité-ny dia ahafahana mampifanaraka azy amin'ny PC misy loharano ambany (Farafaharatsiny amin'ny alàlan'ny fametrahana ISO of Manjaro net dia vitako ny miasa azy amin'ny hafainganam-pandeha tena tsara amin'ny Acer One miaraka amin'ny RAM 1 GB).
Ary koa, raha tsy ampy izany dia mila mijery ny tetikasa KLyDE (tompon'andraikitra KDE) ianao.
Mila fampianarana momba ny fanaingoana LXDE sy XFCE ianao, tokony ho hitanao ny fanovana natao azy ireo, tadiavo amin'ny Internet, ny sasany tsara kokoa noho ny KDE.
Ity dia zavatra nokianin'ny olona sy ny mpamorona maro, ao anatin'izany i Clem Lefevbre: GNOME manova zavatra eo amin'ny kinova, ny famoahana tsirairay dia toy ny fanandramana ary miahiahy ny mifanentana amin'ireo "fampiharana an'ny antoko fahatelo" izahay. Ireo mpampiasa GNOME dia hanala tsiny ahy, saingy mahadoka ity tetikasa ity.
Amin'ny andro tokony hiverenako any amin'ny Gtk dia hametraka ny fitokisako amin'i Xfce indray aho. Inona ihany koa, tiako ny manoro hevitra ireo mpamorona anao fa mampiasa tranomboky hafa izy ireo fa tsy ny Gtk, angamba ny E17 na Qt.
KDE, isan'andro mandalo dia tiako bebe kokoa ianao ... bebe kokoa.
Hadinoy ny fanolorana fivarotana boky hafa. Tsy faly izy ireo manoratra Xfce amin'ny voalohany.
Manaiky aho, azonao ekena na tsy ekenao ny fanapahan-kevitra sasany, saingy voaporofon'ny fotoana fa zon'ny Canonical ny momba ny hadalan'ny GNOME.
Canonical dia mikendry ny hamorona birao tsy miankina tsy miankina amin'ny GNOME, ary hitako ny antony.
+1 Avy amin'izay hitako Qt no làlana ... U_U
Efa nolazaiko izany ary averiko:
Gnome dia tsy liana amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo forks izay ataon'ny sasany amin'ny base Gnome…. Gnome dia manana drafitra hafa hanovana ny tontolo iainana ho lasa rafitra fiasa antsoina hoe GnomeOS.
noho izany izy ireo dia mitondra dalambe sy haingam-pandeha FAST ary tsy mody mijery any aoriana ary miandry ireo hafa izay manao forkara hahatratra azy ireo satria ry zalahy avy any Gnome.
Famaranana: Raha te hampiasa zavatra GTK ianao dia ampiasao ny Gnome Shell fa tsy ny forkiny
Ny olana dia, araka izay tadiavin'ny GNOME hanana OS GNOME dia maro ny fangatahana Gtk no tsy mifandray mivantana amin'ilay tetikasa. Inona koa, azontsika lazaina izao izay ananan'ny GNOME:
- Totem (tsy haiko hoe inona no iantsoana azy ankehitriny)
Na izany na tsy izany, sy ny sisa amin'ireo fisoratana anarana izay mety ho hita ao anatin'ny tetikasa izay averiko indray: Tsy dia maro izy ireo, ary tsy izy ireo koa no tsara indrindra ... Ka momba ny inona izy ireo? Raha mihodina amin'ny lamosina rehetra any izy ireo na tsy manantena ny hifanaraka amin'izy ireo dia hitako fa voadona mafy tokoa izy ireo.
Video LOOL no iantsoana azy, tsy vazivazy xd
Eny, io ihany no shit miaraka amin'ny anarana hafa .. Mitohy amin'ny SMPlayer / MPlayer, VLC ary hatramin'ny Dragon Player ..
Ny mpilalao rehetra dia tsara kokoa noho ny totem, ary ny mpilalao dragon raha mampiasa phlone vlc na xine ianao dia ataoko tsara. Na dia mitifitra gnome mplayer amin'ny mplayer2 aza aho
Marina izany, koa aza manahy, ny ankamaroan'ny rindranasa dia mbola ao amin'ny Gtk2 ary tsy mikasa ny hampita azy ireo any amin'ny Gtk3 izy ireo, ao ohatra ny Firefox lehibe.
haingana be ny havany, manome endrika foana izy ireo isaky ny 6 volana https://en.wikipedia.org/wiki/GNOME#Versions (diabe, septambra) toy ny ubuntu.
Ny tsy tian'izy ireo iaraha-miasa dia olana iray hafa (miaraka amin'ny fironana tsy hanaiky ny fifanarahana mihemotra, hita ny adwaiata), ary tsy ny hadisoan'ny gnome ihany, fa ny forks ihany koa, raha ny fijerin'ny vokatra azy io tokony tsy dia hahafinaritra anao ny manova tranomboky roa (izay ny mety anananao) ary mampiroborobo azy ho vokatra hafa. Tsy manambany DE aho, fa tsotra izany, nitsikera azy ny rehetra ary nilaza hoe andao hanao fork hafa, fa araka ny efa voalaza, raha tianao hofenoina ity dia tsy maintsy hahita azy ireo miaraka amin'ny tranomboky rehetra ianao ary manana, raha hitan'ny olona Raha notsikerainy izany, tokony hipetraka eo anilan'ny mpampivelatra izy (farafaharatsiny amin'ny alàlan'ny mailaka), tsy ho nisy izany toe-javatra izany, ary ambonin'izany rehetra izany dia olona ny olona manoloana ireo tetikasa ireo ary mihetsika toy izany izy ireo, fahatsapana arak'izay hitany eo afovoany (fa tadiavo fa mety misy tanana tsy hita maso any aoriana). Manantena aho fa amin'ny ho avy dia hiverenana io toe-javatra io, fa noho io zavatra roa io dia tsy maintsy miova ary fifandrafiana tsy misy fotony izay naroso nandritra ny taona vitsivitsy no tokony hatsahatra.
Manantena aho fa tsy ho diso fandray aho, hametraka ny firaisankina ao amin'ny andohalambo dia tokony hisafidy ny gnome sy ny firaisankina amin'izao fotoana izao, fa ny fanapahan-kevitro kosa dia ny tsy ahafahako mampiasa ilay gnome 3.8 [gnome-stable] izay eo am-pitsapana, ary koa tsy azoko atao. ampiasao ny xorg 1.14 (amin'ny fitsapana ihany koa), fanapahan-kevitro izany
Ho an'izay, nivadika ho maodely tompony izy ireo ary ...
Ity GNOME ity sy ireo forkany dia efa miantso mafy any an-danitra. Mandrosoa ary ahodina ny GNOME; raha eo ny LXDE, XFCE ary ny KDE, dia tontolo iainana izy ireo amin'ny toe-javatra izay tsy mikorontana intsony ary manome anao fitaovana miasa tena izy. Raha ny tena izy, ity GNOME ity sy ny forkiny dia efa miorina amin'ny mampihomehy.
Tiako ny gnome 2, ary tsy tiako ny Gnome Shell, LXDE, XFCE, KDE, na Unity
Ary satria tsy mampiasa matte ianao, ny traikefa dia toy ny 95% an'ny gnome 2. Ny tutorial rehetra gnome 2 dia nanompo ahy tamin'ny matte rehefa nampiasaiko.
andao jerena, ny zavatra misy azy ireo, ny zavatra tsy tadiavinao dia ny COMPIZ, vanim-potoana, ka aleo tsy afangaro ny zavatra. Tsy nisy nampiasa GNOME 2 raha tsy nisy compiz; sa diso aho? izay no tsy hita
Manantena aho fa izany no izy ary ny mety fanitsiana ny bara satria raha tsy izany dia tsy azoko. Ny GNOME2 dia vazivazy tsotra fotsiny ...
Mieritreritra aho fa nokapohinao tamin'ny lohany ny fantsika tamin'ny fanamarihana, malahelo ilay compiz aho 🙁
Na ny gnome aza tena minono, satria nampiharina ny gnomehell; ho an'ny PC ambany (toy ny ahy) hinono! Tena tsy mandeha izy io, omeko fotoana ny LXDE, XFCE
NY MARINA !!!!! Tsy tiako mihitsy ny kanelina, tohizako miaraka amin'i Mate izay mizotra tsara sy miaraka amin'i Manjaro 🙂
Gnome dia nanjary mpanafika fifandraisana quintessential hatramin'ny namoahana ny Gnome 3.
Heveriko fa tsy hadisoan'i Cinnamon ny hoe "ao ambadiky", satria raha hanao fampitahana isika dia hanome tsiny an'i Debian amin'ny fahaiza-manao maro (hitako ny fikapohana manatona haha).
Ny fanafoanana ny fampifanarahana mihemotra dia toy ny mino fa maty hampiasa azy io ny tsirairay ary izy ireo no mpitondra ny tontolon'ny birao.
Aleoko ny MATE, tsara izany, maivana ary eo amin'ny lala-mahitsy no eritreretiko.
[Elav dia manamboatra ramanavy amin'ny reny]
Tsy haiko ry bro, heveriko fa samy diso izy ireo, tsy maintsy efa noheverin'i LM izany alohan'ny hidirany anaty rano lalina sy mikitroka. Ohatra iray amin'izany ny hoe kanelina dia tsy miasa raha tsy miankina amin'i Nemo na hoe tsy nanana mpiasa hiasa tamina tetik'asa mitovy habe amin'izany izy ireo. Etsy ankilany, LM diso ny filokana, navelany tany ankoatran'ny LMDE ho any Kanelina ... "Mikasika ny masoko no tadiaviko fa tsy mofo manontolo." #EpicFail.
Ankehitriny dia tsy maintsy mitandrina i LM, Mate no asany faharoa lehibe, inona no tombony azony? Tsy dia mieritreritra firy aho, amin'ny fotoana rehetra, mijanona ny tetik'asa ary tonga tsinontsinona ny LM. Miisa ny andron'ny kanelina, inona no ho LM raha tsy misy ny firavaka satro-boninahiny? Distro iray hafa miaraka amina kanto hafa? Ahoana no mifanipaka, manomboka amin'ny laharana 1 amin'ny Distrowatch ka hatrany amin'ny fihazakazahana ho tonga zavatra tsara mety hisy ary tsy hisy intsony? Mandoa vola ny lesoka ary lafo ny LM amin'ny lovia vaky ...
Bro, ary nolazaiko anao koa izany:
Na ny Ubuntu na ny Linux Mint dia naka ny GNOME amin'ny toerana misy anao rehefa nilamina ity tetikasa ity. Milamina amin'ny heviny fa tsy nanova ny API tsy miova sy kinova aorian'ny kinova izany dia ny fanovana miniskule ihany no nitranga.
Mba hahafantaranao ny fomba fijeriko dia manome ohatra tsotra iray aho: Andao atao hoe mandeha any amin'ny magazay ianao ary mividy Laptop, izay amin'izao fotoana izao, dia miasa amin'ireo mpamily rehetra ankehitriny sy ny hafa. Rahampitso dia manapa-kevitra ny mpamorona ny Kernel na ny rindrambaiko sasany fa tsy hifanaraka amin'ny Laptop intsony. Fahadisoan'ireo mpanamboatra fitaovana ve izay tsy namaritan'ny namidin'izy ireo anao ny ho avy miaraka amin'ilay Rindrambaiko ampiasainao?
Eny, Cinnamon no fitaovana ary GNOME ny rindrambaiko, hita amin'ity toe-javatra ity. Mark sy Clem dia miloka amin'izay fotoana izay asa izay miasa .. Saingy efa hitantsika ny fiovana, ny Unity dia mankany Qt, Cinnamon na mivoatra na manova famakiam-boky .. izay sisa tavela.
Misy manana fisalasalana ve fa ny LM dia distro izay mihoampampana manana an'io toerana io?
Raha ny tena izy dia distro izay tsy manana trano fitehirizam-bokiny akory, lisitry ny lisitry (amin'io lafiny io) ...
Tsy hitako izay antony itahirizana distro manokana miaraka amin'ny kanelina, raha maharitra 2 minitra ny olona iray vao ampidirina ao anaty manjaro io akorany io
Hataoko farany ny fametrahana naoty ao amin'ny lahatsoratro rehetra manao hoe: "Miguel, raha tsy olana loatra izany, vakio azafady ny lahatsoratra iray manontolo alohan'ny hanomezana hevitra, misaotra." Ary tsy maintsy apetrako ao anaty lohateny mitovy io satria raha tsy izany dia tsy ho hitanao izany. 😀
Namaky clown maromaro aho izay milaza fa hanjavona i Kanelina.
Ireo miteny toy izany dia mivarotra setroka.
Ny sasany amin'ny Firaisan-kina dia miteny mitovy «» »Ho hanjavona« », hampiato ny fitondran-tena maha-zaza ary hitombo.
Sahala amin'ny vehivavy antitra manodidina azy ireo miteny ratsy ny mpifanila vodirindrina aminy izy ireo ary maniry ny ho ratsy indrindra satria eny.
Haber, raha toa ka tsy miresaka mandritra ny tontolo andro izy ireo dia manampy amin'ny kaody amin'ny tetikasa rindrambaiko maimaimpoana.
Mikasika ny GNOME dia sambo tsy misy familiana, indray andro dia te-hamono ny Gnome Classic ny GNOME ary andro iray hafa dia milaza zavatra hafa izy ireo ary esorina ao anaty boaty maty.
GNOME dia tsy manana hevitra raikitra amin'ny ho avy, izay manome vahaolana ho an'ireo mpamorona, toa nanao izay fomba rehetra hanakorontanana ny fiainan'ireo mpamorona hafa izy.
[Nosoratana tamin'ny Windows noho ny antony niasana]
Mampiasa an'i Debian aho ary tsy nanohitra an'io fork io afa-tsy ny fanemorana an'ity tontolo birao ity. Inona koa, aleoko ny MATE noho ilay interface miafina KDE.
Mikasika ny GNOME 3 dia nanapa-kevitra ny hanolo izany amin'ny MATE aho rehefa mivoaka i Debian 7 (Wheezy), satria manavotra ny traikefa nahafinaritra nandao ahy ny GNOME 2 ary koa, mahazo aina bebe kokoa aho amin'ny tambajotra marobe sy hazavana toy izany toy ny GNOME 2 sy XFCE (na dia saika mavesatra toa ny interface Windows aza ny KDE, saingy mahomby kokoa raha resaka fitoniana).
Na izany na tsy izany, mivavaka aho mba ampidirina amin'ny fomba ofisialy ao amin'ny tranon'omby Debian ny MATE ary tena hamerina ilay adinon'ny GNOME izy io. Amin'izao fotoana izao dia mifikitra amin'ny fanavaozana an'i Debian Squeeze 7 aho.
Tokony hitsahatra tsy hiantehitra amin'ny Mint intsony ny kanelina, fa ny Kanelina amin'ny Arch based distro dia toa hevitra tsara tamiko. Saingy tsy ny zava-drehetra ny rindrambaiko ary tsy maintsy tadidinao fa misy ny fotony amin'ny zavatra rehetra ary ny zava-dehibe dia ny fiarahamonina.
Mazava ho azy fa novonoin'izy ireo fotsiny i Cinnarch ary voajanahary amin'ny anarana hafa izany.
Heveriko fa amin'ny farany, ny fizarana dia hahita vahaolana ary hanao fanitarana tsara ho an'ny gnome 3.
Na dia manintona ny saiko aza ireo distros toa an'i Manjaro, ArchBang, Cinnarch, Chakra, heveriko fa amin'ny farany dia sarotra kokoa noho ny tokony ho izy ny zava-drehetra. Aleoko atao tsotra ihany. Its T…
Eny, toa vaovao ratsy izany amiko, satria nandao antsika ny gnome 2 Cinammon, izany no tontolo iainana nahatsapako ho nahazo aina indrindra. Tiako i Kde ho toy ny birao eran-tany, saingy mampiady saina ahy izany amin'ny lasa. Tiako Xfce fa tsy dia mahazo aina aho. LXDE na fanazavana toa maitso amiko. Ary ny shell Unity na Gnome dia tsy vitako mihitsy ny miasa. Na izany na tsy izany, heveriko fa hanana mpanaratsy maro aho saingy tiako i Cinammon ary manantena aho fa hanana ho avy tsara kokoa noho ny vinan'izy ireo mialoha.
Heveriko fa maty i Gnome rehefa nanao ilay fitsambikinana ho an'ny kinova 3. Nanomboka teo dia nopotsirina ny masony, naka fanapahan-kevitra tsy takatry ny saina, nifindra noho ny fihavaozana, saingy tontolo tontolo hafahafa ihany no azon'izy ireo, na inona na inona afa-tsy intuitive sy configurable. Ary io fihetsika io (ny tsy fanohanako ireo kinova taloha, izay tsy fantatro), heveriko fa ny mololo nanorotoro ny lamosin'ny rameva. Famadihana ny mpampiasa izany.
Inona no nitranga Kanelina? Tsara be ianao taloha.
[Nosoratana tamin'ny Windows noho ny antony niasa].
Manontany tena aho hoe inona no antony anaovana mariky ny tontolo iainana izay ankehitriny sy havaozina? Raha mbola eo am-pivoarana tanteraka ny Gnome, inona no tsy maintsy ataonao avy eo? Manemotra izany fampandrosoana izany mba hahasambatra ny fork? Azoko an-tsaina ny fihaonana misy eo amin'ireo mpamorona ny iray sy ny iray hafa: - Kanelina: «hey, Gnome, aza mbola mivoatra satria raha tsy izany tsy afaka mandroso aho»; - Gnome: «Eny, kanelina, tsara izany, tsy mandroso aho mba hahafahanao maka fotoana hanamboarana tena».
Ny traikefa izay mitranga ao amin'ny Kanelina sy any Gnome Shell dia tsy mitovy, noho izany ity fork ity dia manana ny antony maha-izy azy, manolotra birao nentim-paharazana miaraka amin'ny teknolojia vaovao.
Ankehitriny, toa ny olana dia tapaka ny fampifanarahana ny API manomboka amin'ny GTK 3.6 ka hatramin'ny GTK 3.8, zavatra tsy tokony hitranga, satria tsy ny GNOME ihany no mampiasa GTK, fa misy tetikasa GNOME mahaleo tena maro izay mampiasa azy ireo koa. Manaiky aho fa ny GNOME dia tsy mila miandry ny hafa, fa mieritreritra aho fa tsy ilaina ny manapotika ny API isaky ny dikanteny (mitandrema, tsy mpandahatra programa aho na inona na inona, avy amin'ny hevitro fotsiny izany. fahitana).
+1 Izany no tiako holazaina.
@cookie sy elav: heveriko fa samy diso izy roa. Tsy mety ny mampandeha zavatra mivoatra. Raha te-hitrandraka kanelina ianao mba hiasa amin'ny fizarana rehetra, dia hadisoana goavambe izany, ary noho izany dia misy distros mandao azy. Ny fork marani-tsaina kokoa dia ny Mate, ohatra, izay natao hamerenana ilay Gnome 2.x efa ho "nalevina".
Miverina amin'ny mitovy ihany isika, tena ilaina ve ny manapaka ny API vao afaka mivoatra? Ary raha izany dia azo heverina ho tetikasa marin-toerana ve ny GNOME (ny tiako holazaina dia ny fitoniana ao amin'ny fikambanananao ho tetikasa)? Ahoana ny hevitrao fa hisy olona handahatra fandaharana amin'ny fampiasana tranomboky GTK 3 raha tapaka ny fifanarahana isaky ny kinova?
Zavatra iray hafa, nilaza i Clem fa ny kanelina dia TSY tetikasa LM mahaleo tena (ao amin'ilay lahatsoratra dia misy rohy izay voalaza ao, raha te hamaky azy ianao), izany hoe tsy natao hiasa amin'ny fizarana rehetra toa anao lazao.
@cookie: «… Nilaza i Clem fa TSY tetikasa mahaleo tena avy amin'ny LM i Cinnamon…»
Miaraka amin'izany, ny adihevitra iray manontolo momba ny fork na tsy misy fork dia tsy misy ilana azy, ary, araka ny nolazain'izy ireo tany ivelany, amin'ny farany Cinnamon dia ny LM izay Unity to Ubuntu, ary raha tsy mahaleo tena amin'izay lazain'i Clem, dia ny sisa ny disto dia manao tsara fa tsy hampiditra azy ao amin'ny birao fiasan'izy ireo. Ary avy eo mitsikera an'i Gnome izy ireo? Rahoviana no miasa ny akoranao amin'ny hafa rehetra?
Ary eto isika dia miditra amin'ny loop indray, fa raha fork na tsia. Izany hoe, araka ny nolazaiko tany am-piandohana, resaka tsy misy dikany, ary i Clem dia mampahafantatra ny tenany amin'ny Kanelina izay ahazoany aina indrindra…
Tahaka ny nolazainao hoe "Kanelina dia LM inona ny Unity ho an'i Ubuntu", noho izany io fork an'ny GNOME Shell io dia misy dikany, raha mbola ao anatin'ny Mint izy io. Ity no valiny tiako homena ny fanontanianao:
«… Inona no ilaina amin'ny fanaovana fitadiavana tontolo iainana izay ankehitriny sy havaozina? ..»
Eny tokoa, tsy halako ny GNOME, manintona ny saiko tokoa izany; ary tsy dia faly aho fa nampiditra Cinnamon tamin'ny distro hafa izy ireo noho io karazana olana io.
Ok, ankehitriny raha mifanaraka isika, dia niresaka tamin'ny lohako teo amin'ny distro hafa aho. Heh, ary ny mieritreritra fa ny ampahany amin'ny ekipa Fedora dia nihevitra ny hametraka ny Cinnamon amin'ny toerana misy anao, na dia raha mahavita mampandeha tsara azy aza izy ireo, ny ekipan'ny Clem dia mila mahazo isa handraisana kilasy ...
Tena hadalana ny fahitanao ny hevitrao etsy ambany.
«» »Ary mieritreritra fa ny ampahan'ny ekipa Fedora dia nihevitra ny hametraka ny kanelina ho toerana misy azy, na dia raha mahavita manao azy tsara aza izy ireo, ny ekipan'ny Clem dia tsy maintsy mahazo isa haka taranja vitsivitsy ...« »»
Karazan'io hadalana io.
Raha mampihatra ny CINNAMON ao amin'ny Fedora ny mpamorona Fedora dia tian'izy ireo izany.
Ny hevitra momba ny CINNAMON dia teraka tao amin'ny Linux Mint.
Satria raha tsy izany dia tokony nanamboatra fork mitovy amin'ny CINNAMON ny mpandahatra fandaharana Fedora taloha, izay tsy nataon'izy ireo.
«Tsy iza izany fa ny GNOME ihany. Ny andiany 3.8 an'ny biraon'i Miguel de Icaza », Marina fa ity lehilahy ity, ilay lohan'ny fragmentation eo amin'ny tontolon'ny birao, dia mamely ahy toy ny daka amin'ny baolina, na inona na inona ny rafitra fiasa ampiasainy sy / na ny hadalana mamoaka amin'ny vavany izy, fa avy eo hanomezana tsiny azy noho ny faharatsian'ny Gnome 3.8 amin'ny fanonona fotsiny ny anarany hamoaka azy aminy dia tsy ekena. Vicent dia mpifaninana mety kokoa amin'ity truño apetraka eo alohan'ny mpankafy ity. Raha diso aho ary ny hanomezana laza anao dia ny fanararaotanao an'i Federico Mena no nataonao.
Etsy ankilany, ity dia zavatra hita ho avy, miaraka amin'ny birao avy amin'ny distro, izay hany zavatra hainy nanao tsara (tsy milaza aho fa io irery no vitany), dia hanararaotra ny asan'ny hafa (ubuntu, debian, gnome).
Toa an'i Gnome ny lesoka rehetra amin'ny famakiana ny apis, fa tsy amin'ny visoñez an'ny mpamorona izay nampiasa an'ity tontolo ity tamin'ny fampandrosoana mavitrika ho fototry ny azy ireo (ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny hatezerana mahery vaika dia karazany roa izay be dia be avy amin'ny tontolon'ny rindrambaiko maimaimpoana).
Fandinihana farany: Mbola liana ihany ny hevitra fa ny lahatsoratra roa farany momba ny kanelina ato amin'ity bilaogy ity dia tonga tamin'ny fanemorana kely tamin'ny 2 ora izay nivoaka tao amin'ny Linux, samy mpanoratra iray ihany ary ny hevitra voalaza ao amin'izy roa dia samy hafa be amin'ireo nafafy tamin'ny lahatsoratra tany am-boalohany. Avy amin'ny loharano inona no fisotroan'i El de la Fuente?
Aza mahita firaisana tsikombakomba izay tsy misy, hoy aho "birao an'i Miguel de Icaza" tsotra mba tsy hitenenana hoe GNOME indray ary hataoko miverimberina, toy ny nolazaiko hoe "ny birao noforonin'i Linux Mint" tsy hiteny hoe Kanelina, na "ny distrikan'ny fianakavian'i Arch" tsy hiteny hoe Cinnarch sy Manjaro. Ary raha nisafidy ny hanonona an'i Icaza aho dia satria izy no fantatry ny mpanorina indrindra ary izay mpamaky no hahafantatra izay noresahiny, TSY MISY INDRINDRA.
Raha ny loharanom-baovaoko dia azonao jerena amin'ny faran'ny lahatsoratra fa tsy zava-miafina izy ireo. Nahafantatra ny vaovao teo aloha aho tamin'ny famakiana ny Somos Linuxeros; raha ny marina dia tsy nahita ny lahatsoratr'i MuyLinux aho raha tsy rehefa avy namoaka ny ahy (nisoratra anarana aho fa tsy niditra tao amin'ny Google Reader tontolo andro). Ary hitako ny momba an'ity vaovao ity tamin'ny famakiana ny MuyLinux ary notanisiko tsara izany.
Tsy hitako izay hitovizan'ny lahatsoratra raha toa ka maneho hevitra mitovy amin'izany izahay. Na izany aza, raha mamaky ny fanehoan-kevitra tamin'ny lahatsoratra teo aloha ianao dia hahita fa ny hevitra maro aseho ato amin'ity lahatsoratra ity dia efa naseho tao ary toa hevitra tsara ny manaingo azy ireo hamenoana ny lohahevitra.
Gnome no MPANJAKA .. Raha tsy te hanaraka anao ny hafa dia manaova zavatra araka ny fanao. Hatramin'ny fotoana maha-gnome ny olana raha ny tena izy dia ireo kopia novaina tsy afaka manaraka azy.
Navela irery ny maty ...
Raha te hampiasa Cinnamon mijery Linux Mint isika, raha tsy izany dia mankanesa any amin'ireo safidy hafa ankehitriny.
Na izany na tsy izany dia tsy fantatro ny marina satria raha tokony hanao "union" ireo mpamorona rehetra ireo dia miafara amin'ny fanaovana ny tetikasa tsirairay ary mitambatra zavatra iray hafa ary izany no mahatonga ny fahitako azy be dia be ..
Hatreto aloha dia ny KDE irery no hitako mitambatra, feno fa tsy tanteraka.
Fa aleoko tontolo minimalist toa an'i LXDE na distro asii toa an'i Crunchbang 😀
Ho an'ity: https://blog.desdelinux.net/introduce-el-titulo-alarmista-aqui/
Raha vita tsy ho ela dia tsy azo atao ny miara-miasa amin'ny GNOME. Manao izay tiany izy ireo, tsy mihaino ny heviny, ary na dia ny fandraisana anjara amin'ny kaody aza tsy raisina.
Manaiky aho fa tsy tokony ho izy ireo fitrebika saingy noho ny fisian'ny birao tsara kokoa maro dia maro ary tsy mila mandany fotoana amin'izany. GNOME dia tsara taloha fa androany dia tsy inona izany fa ny fako.
Ny tontolo tsy tianao, Manuel, dia tsy midika hoe fako io, kely loatra ny tanjonao. Manana ny lesoka izy, marina izany, fa manomboka eo ka hatramin'ny fako dia misy lava lava. Azoko lazaina toy izany koa ny momba ny KDE satria tsy tiako io, ary tsy tiako satria, toa ny olon-drehetra, manana ny mahatsara sy maharatsy azy io. Tsy matotra intsony ny anao.
Izy io dia manana fampiasa 0, tapaka ny API isaky ny fanavaozana, manalavitra safidy izy ireo, ary ny fomba itantanana ny tetikasa mihitsy. Fako io amiko.
Mariho fa miresaka momba ny GNOME 3 sy ny Shell feno fankahalany aho. Tsy ao anatin'izany ny GNOME 2, Mate, kanelina, Consort, sns.
Esque koa dia mihevitra ny distro ampiasainao, tetikasa izay mety mbola tsy mahita ny mombamomba azy mazava ho azy sy ho an'ny tanora, mety hampidi-doza ny fampiasana azy amin'ny distro toa an'i Arch. Horita fa tetikasa io dia tanora ary maditra mikomy, fa rehefa tonga olon-dehibe izy dia mety ho zavatra hafa izany.
Raha tianao ny hiasa tsara dia avadiho amin'ny distro toa an'i Debian. Mety manana izany ianao.
Amin'ny dock, widgets, fanalahidy manokana ary fanitarana dia azonao atao ny manana modely birao miasa vaovao ao amin'ny gnome 3.
Ary tsara, ny gnome 3 dia manana fomba fanao minimalist, angamba tsy tianao ny mampifanaraka ireo rafitry ny sainao amin'iny na tsy mandaitra ho anao izany.
Ny index de fampiasa dia somary mitombina ihany, porofon'izany fa maro amintsika no mampiasa azy ary milamina. Araka ny nolazain'i @lawliet anao dia mety miankina amin'ny fizarana ampiasain'ny olona io, na dia mitovy endrika sy fomba fiasa amin'ny rehetra aza ny Gnome-shell.
Ary ho an'ity iray izay mametraka ny fahatsapana ity mihitsy ... avy aiza izy ireo?
Miombon-kevitra aminao aho manuel ..
Misy mahalala ny antony nahatonga an'i Alan Mcrae naneho hevitra izay heverin'ny maro ho ratsy amin'i Manjaro?
Raha ny tokony ho izy, ny tetikasa rehetra mifototra amin'ny Gnome dia ho voatendry ho very amin'ny ho avy tsy ho ela ary vao mainka ankehitriny noho ny fiovana marobe amin'izany tontolo izany.
Olona hanazava amiko satria mieritreritra aho fa tsara tarehy Kanelina. Raha tsy misy vondrona fampandrosoana mivaingana ao ambadik'izany dia mandeha ratsy ny raharaha.
Ny fizarana toy ny Archlinux sy ny derivatives dia mampiasa ny birao GNOME farany, ao amin'ny GNOME 3.8 izy ireo izao.
GNOME sy GTK (tranomboky nampiasaina hamoronana GNOME) dia manova ny Gtk API, tsy manome fotoana ho an'ny mpamorona hafa hampifanaraka ny Forks sy ny fangatahany amin'ny GNOME.
Ireo mpitarika ny tetik'asa GNOME dia tsy mifanaraka amin'ireo mpandahatra programa FORK hafa toa an'i CINNAMON ary tsy manaiky ny hevitry ny mpandahatra programa hafa. Izy ireo dia mandray fanovana mahery vaika izay tsy mamela ny fampifanarahana ireo forks sy fampiharana hafa amin'ny GNOME vaovao.
Ohatra, ny GNOME dia ao amin'ny kinova GNOME 3.8 ary mampiasa ny tranomboky Gtlk 3.8. Raha ny Cinnamon kosa voarindra hiasa amin'ny GNOME 3.6 ary tsy afaka mandeha amin'ny GNOME 3.8
Koa satria ny tetik'asa GNOME dia manisy fanovana tanteraka ny GTK API sy ny birao.
Ary tsy mitaky fotoana firy ny fork sy ny mpandrindra hafa handefasana, tsy maintsy mifanaraka amin'ny API vaovao ianao ary maharitra fotoana izany.
Izany no antony tsy hidiran'ny CINNAMON ao amin'ny Cinnarch izay mampiasa GNOME 3.8
izay tsy mifanaraka amin'ny CINNAMON 1.6 /1.8 (izay miasa tsara amin'ny GNOME 3.6).
Ny kanelina dia tsy ho ao amin'ny cinnarch, satria satria ny kanelina dia miorina amin'ny ubuntu ary ny ubuntu dia tsy hanana gnome 3.8 amin'ny 13.04, afa-tsy ny ppa, dia tsy liana amin'ny fitaterana azy izy ireo, saingy tsy misy zavatra hafa.
Ny vahaolana ho an'ny Mint dia ny hiverenana amin'ny hevitra niandohana: raiso ny Gnome Shell ary "hatsarao" amin'ny fanitarana "kanelina"…. tsy dia sarotra loatra ny mitazona azy.
Tsy hitako fa tena miahy izay lazain'ny vondrom-piarahamonina ireo olona gnome.
Rehefa namorona gnome 3 izy ireo dia maro ny olona nanohitra izany, satria noheverin'izy ireo ho fiovana mahery vaika izany raha ny amin'ny gnome 2 tamin'ny androm-piainany, ary na dia izany aza dia nanapa-kevitra ny hanao izany araka izay itiavany azy ireo mihoatra ny noheverin'ny ankamaroan'ny mpampiasa , ary niafara tamin'ny fanaovana an'io mamarracho natao ho an'ny takelaka io fa tsy ho an'ny birao.
Tsy nisy olona nanaiky fa nesorin'izy ireo tao anaty nautil ilay fahitana lisitra madinidinika, satria VERY no nampiasaina, saingy, na inona na inona nolazain'ny vondrom-piarahamonina, dia nesorin'izy ireo ho any Nautilus, izay tsy nijanonany intsony ny fanapahana azy ireo bebe kokoa ary vao mainka TSY AZO .
Gnome 2, kilasika, azo ampiharina, tsotra, mamokatra, natao ho an'ny birao.
Gnome 3, hadalana.
Tsy hitako ny firaisankina ho birao lehibe natao ho an'ny solosaina, raha ny marina, ho ahy ny fomba fiasa fototra ho an'ny pc dia ny kde sy ny xcfe, ny hafa, ny fampiasana ny firaisan-kina sy ny akorandriaka dia resaka tsirony manokana.
Tsy avy ny orana raha oharin'ny olon-drehetra. Nifanaraka tamin'ny Gnome Shell aho ary tsy manova azy intsony amin'izay. Tena mety amiko izany: birao tsara tarehy, mivoatra haingana, matotra (tsy misy resaka "compiz" tsy misy dikany) ary miantoka fiarahamonina tsara ao ambadika.
Ary inona no hiafaran'ny MATE ho toy ny forona gnome hafa….
1.- Ny Gnome dia tsy latabatr'i Icaza, farafaharatsiny tsy 3, satria fony izy nandao ny tetikasa dia efa ela talohan'ny nahatongavany ilay lalana nalehany.
2.- Ny Gnome dia tsy omena tsiny na inona na inona, na kely toy inona aza ny mifanentana aoriana, izany no ady ary mifototra amin'ny tanjona narosony ho fantatsika amin'ny hoe GnomeOS. Satria hadalana ihany izany raha milaza fa tokony hieritreritra momba izay hataon'i Ubuntu, Snowlinux, sy ireo zanany vavy am-polony maro hafa mifototra amin'ny rafitr'izy ireo i Debian.
Salama, vaovao amin'ny Linux aho, tiako ho fantatra hoe inona ny fizarana Linux an'ny sary.
na ny fomba fandaozana ny Linux-mitovy tanteraka ..
Fanasana ho an'ny Antoko famotsorana "Ubuntu 13.04" nataon'i humanOS